1 -Vavanya iziphene! Soloko uhlola iglasi ngeziphene kunye nokuqhekeka kweenwele. Nika ingqalelo ekhethekileyo kwiindawo ezikufutshane nemimoya kunye namalungu. Kwakhona, sukuya ngokuzenzekelayo kweyona bong inkulu ungayifumana. Ungafumana ii-bongs ezinkulu ngexabiso eliphantsi, kodwa uya kuba neeseshoni eziphakathi ukuba ziyi-acrylic ...
Zenziwa njani iiglass bongs?
Iiglass bongs zisebenza kakuhle kwaye zintle iziqwenga zokwenza icuba, ezenziwa kusetyenziswa ubuchule obuphambili beglasi yokuvutha. Kwangokunjalo, ii-bongs zeglasi ezininzi ziza nezinto ezongezelelekileyo ezinje ngokubambisa umkhenkce kunye neepercolator ...